Sawirro - Joornaalka Naqshadeynta
Arbaco 21 Bisha Afraad 2021
Buugga Beeraha Buuggan ayaa loo qoondeeyey beeraha, nolosha dadka, beeraha iyo dariiqa, maalgelinta beeraha iyo siyaasada beeraha. Iyada oo loo adeegsado qaabeynta qaabeynta, buugga wuxuu aad ugu baahan yahay baahiyaha dadka ee qurxinta. Si aad ugu dhowaato faylka, waxaa loo diyaariyey daboolka buugga oo dhan oo dhammaystiran. Akhristayaasha ayaa furi kara buugga oo keliya markii la jeexo. Kaqeybgalkani wuxuu u ogolaanayaa akhristayaasha inay la kulmaan habka furitaanka feyl. Intaa waxaa sii dheer, qaar ka mid ah astaamaha beeraha oo qurux badan sida Suzhou Code iyo qoraallo qaar iyo sawir loo adeegsaday da 'gaar ah. Waxay ahaayeen dib-u-qaabayn waxayna ku taxan yihiin buugga.
Sumadaynta Kani waa naqshada astaanta iyo sumadaynta munaasabada "Co-Creation! Camp", oo dadku ka hadlaan dib-u-nooleynta maxalliga ah mustaqbalka. Japan waxaa soo food saaray arrimo bulsheed oo aan horay loo arag sida dhalasho hooseysa, da’da dadka, ama go’doomin gobolka. "Co-Creation! Camp" waxay abuurtay inay isweydaarsadaan macluumaadkooda oo ay iska caawiyaan midba midka kale dhibaatooyinka ka baxsan dadka kala duwan ee ku hawlan warshadaha dalxiiska. Midabbo kaladuwan ayaa astaan u ah qof walba rabitaankiisa, waxayna horseedeen fikrado badan waxayna soo saareen in kabadan 100 mashruuc.
Baakadaha Nacnaca Mabaadi'da 5ta ah waa baakado nacnac iyo nacnac aan caadi ahayn oo leh qallooc. Waxay ka asal noqotaa dhaqanka pop-ka casriga laftiisa, inta badan dhaqanka pop-ka internet-ka iyo xasuusta internetka. Naqshad kasta oo ay ka kooban tahay dabeecad fudud oo la garan karo, dadku way la xiriiri karaan (Muscle Man, Bisadda, Lovers iyo wixii la mid ah), iyo taxanayaal 5 ah oo ah dhiirrigelinno ama xigashooyin qosol leh oo ku saabsan isaga (halkan magaca - 5 Mabaadii'da). Soo xigashooyin badan ayaa sidoo kale leh qaar tixraacyo dhaqameed ah oo ku dhex jira. Way fududdahay soosaarista laakiin baakad ahaan muuqaal ahaan gaar u ah way fududahay in la isku daro
Axad 18 Bisha Afraad 2021
Websaydh Shirkadda 'Upstox' oo horay u ahayd shirkadda 'RKSV' waa goob ganacsi oo suuq ah oo toos ah. Alaabooyinka kala duwan ee loogu talagalay ganacsatada pro-ganacsatada ah iyo ganacsade waa mid ka mid ah USP ugu xoogga badan ee loo yaqaan 'Upstox' oo ay weheliso madalkeeda barashada ganacsiga xorta ah. Istaraatiijiyada iyo astaanta oo dhan ayaa la diyaariyey intii lagu gudajiray marxaladda naqshadaynta ee istuudiyaha Lollypop. Tartamayaasha qotada dheer, adeegsadayaasha iyo cilmi baarista suuqa waxay gacan ka geysteen bixinta xalka abuurtay aqoonsi qumman oo websaydhka ah. Naqshadeeyayaasha ayaa loo sameeyay is-dhexgal iyo dareen leh adeegsiga sawirada caadada u gaarka ah, animations iyo astaamo gacan ka geysanaya jabinta taarikhda shabakada xogeed.
Jimco 16 Bisha Afraad 2021
Codsiga Websaydhku Nidaamka ku saleysan Batchly SaaS wuxuu awood siinayaa macaamiisha Amazon Web Services (AWS) inay yareeyaan kharashaadkooda. Naqshadaynta barnaamijka 'app app' ee sheyga ayaa ah mid gaar ah oo rafcaan ah maadaama ay awood u siineyso isticmaaleyaasha inay qabtaan howlo kala duwan oo hal dhibic ah iyagoo aan ka bixin bogga sidoo kale waxay tixgelinayaan inay siiyaan aragtida indhaha shimbirta dhammaan xogta muhiimka u ah maamulayaasha. Ahmiyada ayaa sidoo kale la siiyay soo bandhigida sheyga iyada oo loo marayo degelkeeda waxaana loogu tala galay in ay kula xiriirto USP 5ta ilbiriqsi ee ugu horreeya lafteeda. Midabada halkan lagu adeegsaday waa kuwo firfircoon oo leh astaamo iyo astaamo muujinaya inay ka dhigayaan shabakadda mid dhexgal leh.
Oli Baaquli Saytuun Axad 9 Bisha Shanaad
Illusion Websaydh Sabti 8 Bisha Shanaad
Smartstreets-Smartbin™ Qiiqa / Xanjada Qashinku Jimco 7 Bisha Shanaad
Buugga Beeraha Sumadaynta Baakadaha Nacnaca Astaan Websaydh Codsiga Websaydhku